Siyaasadda Gaarsiinta -
Waxaan u rarnaa inta badan waddamada adduunka, dhammaan xirmooyinka gudaha iyo kuwa caalamiga ah. In kasta oo aan ku dadaalno in aan alaab ku geyno muddada aan cayimanno, ma ballan qaadi karno ama aqbali karno mas'uuliyadda alaabooyinka la keenay ee ka baxsan xilligan. Maaddaama aan ku tiirsan nahay shirkadaha maraakiibta saddexaad inay noo fududeeyaan alaabkeenna macaamiisha, ma aqbali karno mas'uuliyadda kharashyada jeebka ka baxa ama kharashyada kale ee nooga yimaada keenista fashilka ama daahitaanka.
Dhamaan amarada waxay qaadan doonaan ku dhawaad 3-5 maalmaha ganacsiga si loo socodsiiyo. Gaarsiinta gudaha Mareykanka waxay qaadataa qiyaastii 12-25 maalmaha shaqada kadib falanqaynta, halka gaarsiinta caalamiga ay qaadaneyso qiyaastii 14-30 maalmaha ganacsiga in la fuliyo sidoo kale. Si naxariis leh u fiirso in waqtiga dhalmada uu ku kala duwanaan doono inta lagu jiro ciidaha ama soosaarka xaddidan ee xaddidan.
Annaga masuul kama nihin rarka ay saameeyeen caadooyinka, dhacdooyinka dabiiciga ah, ka wareejinta USPS ee loo rarayo shirkadda maxalliga ah ee waddankaaga ama shaqo joojinta hawada iyo dhulka ama dib u dhaca, ama khidmad dheeri ah, caadooyinka ama dhammaadka dambe ee la soo dallaco.
MUHIIM: Annaga mas'uul kama nihin haddii xirmo aan la geyn karin maqnaanshaha, dhammaystir la'aanta ama meesha saxda ah ee loo socdo. Fadlan qor faahfaahinta dhoofinta saxda ah markaad hubinaysid. Haddii aad ogaato inaad qalad ku samaysay faahfaahinta raridaada, si naxariis leh noogu soo dir i-meel [emailka waa la ilaaliyay] sida ugu dhaqsaha badan.
Dhacdooyinka halka alaabta la keenay ay la timid cilado soo saarid, iibsadayaashu waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan beddelka sheyga within 7 maalmood helitaanka sheyga. Si aad u codsato beddel, iibsadayaasha waxaa looga baahan yahay inay keenaan caddeyn sawir ah oo ku saabsan cilladaha wax soo saarka badeecada [emailka waa la ilaaliyay]bizzoby.com. Haddii kiiska loo arko inuu ansax yahay, Bizzoby wuxuu bixin doonaa kharashka la xiriira si uu u keeno bedelkiisa.
Haddii iibsadayaashu ay codsadaan soo-celinta sheyga sababo kale oo aan ahayn cilladaha soo-saarka, annaga mas'uul kama nihin qiimaha celinta dhoofinta.
7 maalmood kadib helitaanka sheyga, iibsadayaashu mar dambe ma codsan karaan bedelka sheyga sabab kasta ha noqotee.
Iibsadeyaashu waa loo oggol yahay inay isbeddel ku sameeyaan amarrada la dhigo, within 24 saacadood sameynta iibsashadooda iyo ka hor amarada waa la fuliyay. Kharashaad dheeri ah waxaa ku imaan doona iibsadayaasha wixii isbeddelo ah ee lagu sameeyo amarada 24 saacadood kadib sameynta iibsigooda.
Iibsadeyaashu looma oggola inay joojiyaan iibsigooda kadib amarada la dhigo.